Afaka 15 andro… : hiakatra 700 Ar ny saran-dalan’ny taxi-be | NewsMada
Afaka 15 andro… : hiakatra 700 Ar ny saran-dalan’ny taxi-be
Manana 15 andro hiomanana amin’ny fiakaran’ny saran-dalana ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Nanapa-kevitra hampiakatra ny saran-dalan’ny taxi-be ho 700 Ar ireo kaoperativa mpitatitra eto an-drenivohitra.
Ho lasa 700 Ar ny saran-dalana rehefa dila io fotoana io taorian’ny fanapahan-kevitry ny fivoriamben’ny mpitatitra eto Antananarivo sy ny manodidina, omaly. Voakasika amin’izany ny UCTU FA, UCTS, UCTU ary ny FMA. Nanatrika ny fihaonana niaraka amin’ny mpitantana ny kaoperativa ny solontenan’ny mpanjifa izay nanaiky ny hevitra tapaka tao. Nisy fanadihadiana nataon’ny mpitatitra raha mbola 2 720 Ar ny vidin’ny solika tamin’izany, voakajy fa manodidina ny 700 Ar ny saran-dalana sahaza ny vesatra mianjady amin’ny mpitatitra. Amin’izao fotoana izao 3 350 Ar ny gazoaly 1 litatra ka tsy maintsy miroso amin’ny fampiakarana.
Na eo aza ny fampiakarana ny saran-dalana, mbola miandry ny “compensation” avy amin’ny fanjakana ny mpitatitra satria fanampiana efa nekena fa homena azy ireo ka tsy tokony hajanona ny fanefana ny trosa. Nahazo taratasy ny mpitatitra ny fiandohan’ny herinandro teo fa hefain’ny fanjakana ny “compensation” roa volana ary tokony hisy fifampidinihana.
Nangataka ny hanefana ny fanampiana isaky ny faha- 5 ny volana itsahana ny mpitatitra. Tsy izay no mitranga fa betsaka ny trosa. Taorian’ny fihaonana tamin’ny minisitera mpiahy, nisy ny filazana fa aloa any “compensation” manomboka jona ka hatramin’ny aogositra 2017. Mbola misy vary mangatsiaka nefa ny taona 2016 ho an’ny mpitatitra marobe. Tapitra ny volana desambra 2017 ny fanampiana ho an’ny mpitatitra. Nandritra ny telo volana voalohany ho an’ity taona ity, tsy nahita tombony mihitsy ny mpitatitra nefa ny tohana ara-bola avy amin’ny fanjakana efa vita ny volana desambra lasa teo. “Tsy izay no tokony hanakanana ny fiakaran’ny saran-dalana satria fanefana trosa efa tamin’ny taona 2016 sy 2017 no ataon’ny fanjakana izao”, hoy ny solontenan’ny UCTS, Andrianalisoa Dera.
Mila vahaolana maharitra avy amin’ny fanjakana ny mpitatitra toy ny fanohizana ny fizarana fanampiana ho an’ny taona 2018.
Sahiran-tsaina sahady ny isan-tokantrano
Sahiran-tsaina sahady ny isan-tokantrano manoloana ny filazana amin’ny fiakaran’ny saran-dalana ho avy. Hiampy indray ny vola mivoaka nefa ny karama tsy mba misy fisondrotany akory. Lasa takalon’aina eo amin’ny fifandroritan’ny mpitondra sy ny mpitatitra ny vahoaka izay efa tena sahirana tanteraka amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana rehetra (vary, arina fandrehitra, sakafo ilaina amin’ny fiainana andavanandro…). Rehefa tsy mahazo “compensation” ho an’ity taona ity ny mpitatitra, tsy hihemotra amin’ny fampiakarana. Ivon’ny fiainan’ny vahoaka ny taxi-ibe satria io no hany fitaovam-pitaterana zakan’ny fahefa-mividin’ny besinimaro. Tsy maintsy hiakatra manaraka ny saran-dalana avokoa ny vidin’entana rehetra ilaina amin’ny fiainana andavanandro.